Itoobiya oo dad rayid ah ku laaysay deegaanka Aw-diinle – Qaranimo Online
You are here: Home 2016 July 19 Itoobiya oo dad rayid ah ku laaysay deegaanka Aw-diinle
Itoobiya oo dad rayid ah ku laaysay deegaanka Aw-diinle
Posted on July 19, 2016 by Ali Omar Ghedi | 0 Comments
Muqdisho, July 19, 2016: Wararka na soo gaaray ayaa sheegayaa in Ciidamada Itoobiya ee qeybta ka ah howl galka AMISOM ayaa dad rayid ah ku xasuuqay deegaanka Aw-diinle ee hoos-tagta magaalada Baydhabo ee Gobolka Baay, iyadoo dadka la dilay ay ahaayeen odayaal iyo culumaa’udiin e gegankaas la yaqaan.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya in Ciidamada Itoobiya ay dileen 14 ruux oo isugu jiray odayaal iyo culumaa’udiin ku sugnaa goob uu ka jiray Xus iyo quraan aqris.
AMISOM ayaa war qoraal ah oo ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka ku sheegtay in dadka rayidka ay ku dhinteen intii uu socday dagaal u dhaxeeyay Ciidamada AMISOM, iyo Al-Shabaab oo ku sugnaa deegaanka War-Diile.
Warka ka soo baxay AMISOM ayay ku sheegtay inay baaritaan ku saabsan dilka dadka rayidka ah ay sameyneyso, wixii ka soo baxana la soo bandhigayi.
Dadka Soomaalida ah ayaa u haysta in AMISOM aysan waxba ka qabandoonin. Ma ah marki ugu horreysa oo Ciidaman Itoobiyan ah ay dad shacbi ah ku xasuuqaan guryahooda.
C/qaadir Cali Xasan oo horay Guddoomiye kuxigeen uga soo noqday deegaanka Aw-diinle ayaa sheegay in Ciidamada Itoobiya ay si ula kac ah u laayeen dadka, ayaga oo qaar risaas ku dileen qar kalena ay gowraceen
“Waa waxba kama jiraan in deegaankaas Al-Shabaab ku sugnaayeen, meesha dadka lagu laayay waxaa ka jiray xus, halkaas baa xoolo lagu qashay, markiiba inta ay galeen ayay rasaas ooda uga qaadeen”ayuu yiri C/qaadir Cali xasan oo sheegay in odayaasha la dilay uu ku jiray aabihiis.
Dhinaca kale Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow oo ka mid ah Baarlamaanka Federaalka oo shalay deegaanka tagay ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya oo deegaanka tagay ay rasaas ka dhex bilaabeen Al-Shabaab oo deegaanka ku dhex dhuumanayay, sidaasna uu dagaalka ku bilowday.
Ma ahan markii u horeysay ee Ciidamada Itoobiya ay dad rayid ah ku laayaan deegaano ka tirsan Gobolada Bay iyo Bakool, waxaana bilo ka hor ay dad rayid ah ku xasuuqeen deegaan ka tirsan Gobolka Baay, Dowlada Soomaaliya wax ay arrintaas ka qabatay ila hadda ma jirto.
Qalbi-gariir ka dib, maxaa noo qumman ? October 14, 2017
Rasaas culus oo xalay laga maqlay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho December 14, 2015
Madaxweynaha Hirshabeelle oo La kulmay Wakiilka Q.M ee Somaliya October 5, 2017
Odoyaasha dhaqanka oo wacad ku marey hadii ay xildhibaanadu ansixin waayaan in ay… March 28, 2017
The face of hunger – In Pictures March 22, 2017
INTERPOl oo raadinayso wiil Soomaali ah November 19, 2015
KULANKA URUR GOBOLEEDKA IGAD, MUXUU KA BEDELI KARAA ARIMAHA SOMALIYA? March 26, 2017
Guddoomiyeyaasha degmooyinka ayaa lagula xisaabtamayo Amniga March 2, 2016
Qaradx Ka Dhacy Muqdisho June 30, 2017
DAAWO: Biloowgii hantida DAMULJADIID December 27, 2016
DAAWO SAWIRAIDA :- Imaaraadka Carabta oo yabooh 45 milyan dollar u sameeyey shacabka Soomaaliyeed April 23, 2017
Maxay tahay Sababta dib loogu dhigay Caleema Saarka Madaxweynaha Galmudug ? May 22, 2017